Ku dhawaad 90 xildhibaan oo katirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo gudbisay mooshin ka dhan ah Jawaari - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaKu dhawaad 90 xildhibaan oo katirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo gudbisay mooshin ka dhan ah Jawaari
March 14, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Shiikh Cumaan Jawaari. [Sawirka]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ku dhawaad 90 xildhibaan oo katirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa mooshin ka dhan ah guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Shiikh Cumaan Jawaari gudbisay, sida uu sheegay guddoomiye ku xigeenka.
Cabdiweli Ibaarhim Muudey oo ah guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka ayaa sheegay in uu gacanta ku hayo waraaq ay soo saxiixeen ku dhawaad 90 xildhibaan oo mooshin ka keenay Jawaari.
Xildhibaanada ayaa Jawaari ku eedeeyay in uu ku xadgudbay dastuurka iyo shuruucda u yaala aqalka hoose ee baarlamaanka.
Warar ayaa sheegaya in mooshinka ay dabada ka riixayso madaxtooyadda Villa Soomaaliya, balse warsidaha Puntland Mirror si madax-banaan uma xaqiijin karo.
May 24, 2018 Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo Somaliland oo ka qarxay deegaanka Tukaraq
Wakiilka QM ee Soomaaliya oo sheegay in khilaafka ka dhex jira Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada uu curyaamin karo dadaalada lagu taageerayo Soomaaliya
Garoowe-(Puntland Mirror) Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa sheegay in khilaafka hadda ka dhex jira Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada Soomaaliya uu curyaamin karo dadaalada lagu taageerayo Soomaaliya si ay u soo kabato. [...]
Kabul-(Puntland Mirror) Diyaarada qumaatiga u kacda oo milatari ayaa ku burburtay gobolka waqooyiga Afghanistan kuyaala ee Baghlan, waxaana ku dhimatay sideed qof oo saarnaa, sida uu sheegay sarkaal. Dawlat Waziri, oo ah afhayeenka wasaarada difaaca [...]